Makiyi mashanu anoburitswa kubva muhuwandu hwekutora | Ehupfumi Zvemari
ISpanish Stock Market vakatengesa mamirioni makumi mana nemakumi mana emakumi mana emadhora muna Ndira, izvo zvinomiririra 41.407% kupfuura mumwedzi wapfuura uye mwedzi wakanakisa kubvira Gumiguru, kunyangwe 6,8% iri pasi peJanuary 18,6. Kune rimwe divi, huwandu hwekutaurirana hwakamira panguva ino nemamirioni 2018, a 15% kudarika mwedzi wapfuura. Idzi idzi idhata dzinoratidza kufarirwa kukuru kwemisika yemari pakati pevatengesi. Zvakawanda kana zvichikwanisika, kana mari yakatarwa parizvino iri pazasi nhoroondo uye nemari iyo isingapfuure iyo nhanho ye0,75%.
Zvakanaka, pamusoro peaya akakodzera data, huwandu hwezvibvumirano hunogona kuve chiratidzo nezve zano iro vashoma nevapakati varimi vanofanirwa kushandisa. Kunyanya kuita mabasa ekutenga kana kutengesa. Nekuti mukuita, vhoriyamu yekutora ndiyo nhamba yekutenga yakavharwa nekutengesa mashandiro mune yakapihwa nguva nzvimbo. Mune ino kesi, inoitwa mumisika yemari uye iyo pakupedzisira inozivisa mamiriro chaiwo emisika yemari iyi. Nenzira imwechete kana imwe.
Ruzivo urwu runogona kuve rwakakosha kwazvo ku gadzira chero zano mukudyara. Kunze kwekuteedzana kwehunyanzvi hwekufungisisa uye zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zveiyi misika yemusika. Hapana chinhu chiri nani pane kuzadzisa zvinangwa zvedu zvechimbi-chimbi pane kuziva ruzivo rwekuti huwandu hwepamusoro kana hwakaderera hwekutora hunogona kutipa. Uye izvo zvinogona kutibatsira kuronga uye kuita purofiti inochengetedza zviine hukuru vimbiso dzebudiriro. Sezvo zvichazoratidzwa kuburikidza nezviito zvinotevera zvatiri kuzokufumura pazasi.
1 Kutengesa vhoriyamu: maitiro
2 Kusimbiswa kwekufamba
3 Yakaderera vhoriyamu, isingavimbike
4 Chokwadi chebhizinesi
5 Kushaikwa kwechido kune chikamu chevarimi
6 Bhizinesi kutenderera shanduko
Kutengesa vhoriyamu: maitiro
Kana yakakwira kana yakaderera kunyoreswa vhoriyamu yakasangana zvine chekuita neyakambenge yatengesa zvikamu, inoita a kusimbiswa kwemaitiro emusika wemasheya. Ose ari mune ekuwedzera uye emhando dzezviitiko. Iko iko kuti chokwadi chekuti vari kurova zvakanyanya kunowedzera mukutaurirana uye izvo zvinokanganisa kumisikidzwa kwemitengo yavo kwakakosha kukosha. Zvakanaka, kana izvi zvikaitika, isu takatarisana neshanduko muitiro. Pamwe kubva mukukwiridzira kuenda kuchikwata kana zvinopesana, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu emisika yemari. Kusvika padanho rekuti chingave chishandiso chine simba kuvhura kana kugadzirisa zvigaro mune akanganisa maitiro.
Kune rimwe divi, kana paine musiyano wakakura mukutsinhana kwekuchengetedzeka, inogona kuve chiratidzo chakajeka chekuti kuenderera mukuita vachitonga kusvika panguva iyoyo. Izvo zvinowanzoitika kuti zvinoitika mumakuru akakosha emisika yemari. Asi zvakare chimwe chinhu chakakosha uye icho ndechekuti kazhinji hapana zvikanganiso zvekusimba kukuru mukucherechedzwa kwemafambiro aya mumusika wemasheya. Pane zvinopesana, ivo vakavimbika chaizvo uye havatsvage ruzivo rwakakosha kuti vakwanise kuzviona munguva. Nekuti zvinowanzoitika kana isu tatova nekuchengetedzeka mune yedu yekudyara portfolio.
Yakaderera vhoriyamu, isingavimbike
Imwe yemaitiro atinogona kushandisa pazasi ndeayo ane chekuita nekusimba kwekufamba uku. Nekuti kana huwandu hwebvumirano hwakanyanya kudiki, zvinoreva kuti kukosheswa kana kuongororwazve kwemaitiro acho yakanyanya kusimba nheyo. Mune mamwe mazwi, isu hatifanire kupa hanya zvakanyanya kune aya mafambiro mumisika yemari. Kuvimbika kwaro, nekudaro, kunenge kuri nil uye hatizomboita sarudzo kunze kwekumirira kuti titarise mhinduro yezviito.
Chimwe chiitiko chinogona kuunza shanduko muhuwandu hwezvibvumirano ndezvekuti zviitiko zvakakosha zviri kuitika mukambani yakanyorwa. Kusvika zvichisiyana nekuwedzera kana kushoma kusimba iyo kuchinjana mazita mumisika yemari. Usakahadzike chero nguva kuti vanogona kukupa kanopfuura kamwe chete chiratidzo nezve zvaunofanirwa kuita kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Ose maviri neimwe nzira kana imwe, uye nekudaro inogona kukupa imwe chiratidzo chine simba yekuvhura kana kugadzirisa zvigaro munzvimbo dzakachengetedzwa. Uye zvakare, iri zano rinokupa iwe kuvimbika kwakakosha mukugadziriswa kwayo.
Kushaikwa kwechido kune chikamu chevarimi
Kune rimwe divi, kutaurirana kushomeka mumazita ayo kunoreva kuti chengetedzo hainakidzwe nekuvimba kwevamiriri vakasiyana vemari uye pakati pevanoisa mari. Mupfungwa iyi, unogona kutarisa zviri nyore kuti mutengo wemusika wemari chii most traded mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kuti chero zvakadaro vanogona kukubatsira kuendesa mari dzako kubva ikozvino. Ichowo chirongwa chinopa chengetedzo huru pamusoro pemhedzisiro inogona kutanga kuburikidza nemaitiro ako ekudyara.
Bhizinesi kutenderera shanduko
Imwe yezviitiko uko shanduko muiyo kutengesa huwandu ndipo panowanikwa shanduko mukutenderera kweupfumi hwenyika dzese. Kazhinji nekuwedzera kwezvakafanana uye izvo zvinogona zvakare kukupa iwe imwe pfungwa nezve izvo zvaunofanirwa kuita nemari yako yekudyara. Nekudaro, iri sisitimu yakaoma kunzwisisa inoda kuenderera mberi nekudzidza pakutsvaga mafambiro aya mumisika yemari.
Sezvawave uchikwanisa, huwandu hwezvibvumirano hwakawanda kupfuura kungochinjanisa muzvivigiro kana midziyo yemari. Uye kubva kwaunogona kuwana ruzivo rwakakosha nezve makambani kuti ugone tenga kana kutengesa zvikamu zvako pane imwe nguva. Uye nenzira iyi iwe unogona kuita kuti mashandiro ako pamusika wekutengesa ubatsirwe pamusoro pezvimwe zvinhu.
Izvi ndizvo zvinhu zvinogona kukubatsira iwe kuita yako investments pamwe kunyanya kubudirira kubva zvino zvichienda mberi. Nenzira yakapusa uye iyo inogona kuchinjika kune ako mamodheru mamodheru, chero awo maitiro kana maitiro. Ndokunge, shure kwezvose, zviri nezvei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Makiyi mashanu anoburitswa kubva muhuwandu hwekutengesa
Kutumira mari nezwi uye ne 'chatbots'